हाम्रो बारे - अनपिंग Shiheng चिकित्सा उपकरण कं, लिमिटेड।
हाम्रो उत्पादनसीई र एफडीए सहित बीस अन्तर्राष्ट्रिय गुणवत्ता र सुरक्षा मापदण्ड भन्दा बढी छ। उच्च गुणस्तर र मानक उत्पादनहरूले घरेलू र विदेशी ग्राहकहरूको लगातार उच्च प्रशंसा प्राप्त गर्दछ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध आर्थोपेडिक उत्पादको OEM निर्माता पनि छौं। धेरै बर्षहरूमा हाम्रा उत्पादनहरू युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिणपूर्व एशिया र अन्य देशहरूमा निर्यात हुन्छन्।
हाम्रो पेशेवर टीम ईमानदारीपूर्वक प्रत्येक ग्राहकको लागि सेवा गर्दछ। तपाईंको विश्वास हाम्रो सेवा को लागी सब भन्दा ठूलो मान्यता हो। हामी लगातार उच्च बजार उत्पादन लाई उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरु मा निर्भर बजार माग अनुसार परिचय गराउनेछौं र ग्राहकहरु संग जित्ने सहयोग को महसुस गर्नेछौं।
अनपिंग Shiheng चिकित्सा उपकरण कं, लिमिटेड
एक विशेष मेडिकल र खेल उपकरण कम्पनी हो जसले पुनर्वास मेडिकल उपकरण र खेल ब्रेस बिक्री गर्दछ। कम्पनीको आफ्नै कारखाना छ, जसले १२००० वर्ग मिटर भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको छ, चार व्यावसायिक अपरेशन वर्कशप र २०० भन्दा बढी अनुभवी प्राविधिक कार्यकर्ताहरू सहित सुसज्जित छ। चीनको उत्तरमा अर्थोपेडिक समर्थन प्रदायकहरू पनि।
हामी विकास, ओर्थोपेडिक ओर्थोसिस, स्प्लिन्ट र पुनःस्थापना उत्पादन आदि बेच्न समर्पित छौं। हाम्रो डिजाइन अपडेट गर्ने प्रक्रियामा हामी विस्तृत रूपमा प्रत्येक उत्पादन गर्नेछौं। हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोल संकल्पना: गुणवत्ता र अखण्डता पहिले आउँछ। उत्तम र लक्ष्यका लागि प्रयास गर्नुहोस्। उच्चतम।
प्रोफेशनल आर एंड डी टीम र आधिकारिक अस्पताल विशेषज्ञहरु संग दीर्घकालीन प्राविधिक संचार हाम्रो उत्पादहरु लाई मानव शरीर मा अधिकतम कार्यक्षमता र सान्त्वना प्रदान सुनिश्चित गर्दछ। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरु मा धेरै श्रृंखला समावेश: घाँटी समर्थन, काँध समर्थन, कम्मर समर्थन, घुँडा समर्थन, टखने समर्थन, प्राथमिक उपचार splint, औंला splint र crutches आदि
१. प्रश्न: के तपाईं एक तथ्याy्क वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
A: हामी कारखाना हौं, आर्थोपेडिक ब्रास र स्पोर्ट्स ब्रेसको उत्पादनमा विशेषज्ञता, हामी १ 15 बर्ष भयो।
हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं हाम्रो मुल्य पहिलो हात, उच्च गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्य हो।
२. प्रश्न: म कसरी अर्डर गर्न सक्छु?
A: तपाईं हाम्रो कुनै पनि बिक्री व्यक्तिलाई अर्डरको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया तपाईंको आवश्यकताहरूको विवरण सकेसम्म स्पष्ट रूपमा प्रदान गर्नुहोस्। त्यसैले हामी तपाईंलाई पहिलो पटक प्रस्ताव पठाउन सक्छौं।
डिजाईन वा थप छलफलका लागि हामीलाई स्काईप, ट्रेडम्यान्जर वा वेचट वा क्यूक्यू वा व्हाट्सएप वा अन्य तत्काल विधिहरूसँग सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ, कुनै ढिलाइ भएमा।
Q. प्रश्न: म कहिले मूल्य पाउन सक्छु?
Q. प्रश्न: के तपाईं हाम्रो र OEM ODM को लागी डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ?
हो: हो। हामीसँग गिफ्ट बाक्स डिजाइन र निर्माणमा समृद्ध अनुभव भएको एक पेशेवर टोली छ। केवल हामीलाई तपाईंको विचारहरू बताउनुहोस् र हामी तपाईंको विचारहरूलाई सही बक्सहरूमा लैजान मद्दत गर्दछौं।
Q. प्रश्न: म नमूना प्राप्त गर्न कहिलेसम्म आशा गर्न सक्दछु?
उत्तर: तपाईंले नमूना शुल्क तिर्नु भएपछि र हामीलाई कन्फर्मेड फाईलहरू पठाउनु भएपछि, नमूनाहरू १- 1-3 दिनमा तयार हुनेछ। नमूनाहरु एक्सप्रेस को माध्यम बाट तपाईलाई पठाइन्छ र days- days दिनमा आउँछन्। हामी नि: शुल्क शुल्कको लागि नमूना प्रस्ताव गर्न सक्छौं तर फ्रेटको लागत तिर्दैनौं।
A: इमानदारीले, यो अर्डर मात्रा र तपाइँले अर्डर गर्ने सिजनमा निर्भर गर्दछ। सधैं १०- based० दिन सामान्य आदेशमा आधारित।
Q. प्रश्न: तपाईको वितरण शर्त के हो?
A: हामी EXW, FOB, CFR, ClF, आदि स्वीकार्दछौं। तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईका लागि सब भन्दा सुविधाजनक लागत प्रभावी छ।
Q Q :. भुक्तानी तरीका के हो?
A1) हामी पेपैल, टी, वेस्टर यूनियन, एल / सी, डी / ए, डी / पी, मनीग्राम, आदि स्वीकार गर्दछौं।
२) ODM, OEM अर्डर, %०% अग्रिम, शिपमेन्ट भन्दा पहिले सन्तुलन।
Q। प्रश्न: तपाईको कारखाना कहाँ छ? म कसरी त्यहाँ जान सक्छु?
A: हाम्रो कारखाना अनपिंग काउन्टी, हेबै प्रान्त चीन, बेइजि Nearको नजिक लोड भयो
१० प्रश्न: कसरी गुणस्तर नियन्त्रण को बारे मा तपाइँको कारखाना मा?
उत्तरः ग्राहकले हामीबाट राम्रो गुणस्तरको सामग्री र सेवा किन् भनी निश्चित गर्न।
ग्राहक स्थान आदेश अघि, हामी अनुमोदनका लागि प्रत्येक नमूना ग्राहकलाई पठाउनेछौं।
ढुवानी अघि, हाम्रो Shiheng मेडिकल स्टाफ क्वालिटी 1pcs 1pcs द्वारा जाँच गर्नेछ। गुणवत्ता हाम्रो संस्कृति हो।
हामी पनि निम्न गर्न सक्दछौं
1. मशीन र कुशल कामदारहरूको साथ कारखाना
२.विदेश व्यापारमा अनुभवी कर्मचारी, उच्च गुण सेवा
W. हामी सानो अर्डर र OEM / ODM अर्डर स्वीकार्न सक्छौं
Custom. अनुकूलित लोगो, धुने लेबल, प्याकेज, रंग कार्ड, र box्ग बक्स स्वीकार।
Professional. पेशेवर डिजाइनर र दक्ष कामदारहरूले तपाईंको विशेषको लागि उत्पादन उत्पादन गर्न सक्दछन्।
CE. उच्च स्तर गुण, सीई / एफडीए र आईएसओ प्रमाणीकरणको साथ
Com. प्रतिस्पर्धी मूल्य र छिटो डेलिभरी, सबै शिपिंग विधि स्वीकार गरिन्छ
V.भरी भुक्तान विधि, LC, TT, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम र पेपैल
9. लामो समय ग्यारेन्टी र बिक्री पछि सेवा
१०. यो एक साथ हाम्रो ग्राहकहरु संग ठूलो बढ्न हाम्रो इच्छा छ